Kana vana vauya kuchikoro vakapfeka yunifomu yakanaka zvinoita musiyano mukuru munzira iyo vana vanoisa pfungwa pakudzidza kwavo kuchikoro. Tinokumbira kuti vabereki vabatsire kutumira vana vavo muunifomu yechikoro zuva rega rega.
Yehembe chena kana polo shati ine logo yechikoro
Dema kana pfumbu yechinyakare mabhurugwa echikoro kana masiketi
Navy yebhuruu yekumhanyisa mabhodhoro (NURSERY UYE KUCHENGA CHETE)
Nhema kana grey zvikabudura zvechikoro muzhizha
Bhuruu-yakatariswa madhirezi ezhizha muzhizha
Grey tights munguva yechando uye chena masokisi muzhizha
Bhutsu dzechikoro nhema
Bhuruu kusvetuka, majuzi uye makadhigani ane mucherechedzo wechikoro
Tinokurudzira kuti vana vese kubva kuNursery kusvika pagore rechitanhatu vane bhegi rebhuruu rePorters Grange. Izvi zvinogona kuunzwa kubva kuhofisi yechikoro.
Yakachena yakatenderera mutsipa t-shirt ine logo yechikoro
Navy bhuruu bhuruu
Navy yebhuruu yekumhanyisa pasi
Navy yebhuruu chikoro PE majuzi
Nhema plimsolls kana varairidzi
Bvudzi rakanyanyisa uye maitiro akaveurwa haana kukodzera. Bvudzi refu rinofanira kusungirwa kumashure kuti rirambe rakashambidzika uye kubuda mumaziso avo. Izvi zvinobatsirawo kudzikisa kesi dzenzara dzemusoro. Tinokumbira kuti zvisungo zvebvudzi zvidiki uye kuti uta haupfeke. Zvisungo zvebvudzi zvinofanirwa kunge zviri mune zvematongerwo enyika kana zvechikoro.
Mhete dzinofanirwa kungova zvidiki zvidiki uye dzinofanirwa kubviswa nemwana kune PE. Vana havafanire kupfeka zvishongo, chishongo, mhete kana chero humwe hwamabwe. Wachi inogona kupfekwa asi inoda kupihwa kune vadzidzisi kuitira kuchengetedzwa kwakachengeteka panguva yePE kana yezvidzidzo zvekushambira.
Paul's Discount Zvipfeko
Nhare: 01702 466431